"Dzorerazve Jamaica" Mushandirapamwe Kubudirira Kukuru Kwekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Jamaica Nhau » "Dzorerazve Jamaica" Mushandirapamwe Kubudirira Kukuru Kwekushanya
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dzorerazve Jamaica - VANHU VOKUTANGA - Michael Dixon (kuruboshwe) nemukomana wake Loray Dudley vanowana kwaziso yegokora kubva kuna Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett mushure mekunge acheka ribhoni kuratidza kuvhurwa kwe49-suite Zoetry Resort muM Montego Bay nguva pfupi yadarika. Michael naLoray, vanobva kuMaryland, USA, ndivo vaive vekutanga vaenzi kupinda muhotera iyi mushure mekuvhurwa kwayo. Loray, zvakadaro, ndiJamaican, anobva kuMontego Bay. Semumiriri wekufamba anga achiunza vashanyi kuJamaica kubva Chikunguru.
Sezvo chikamu chekushanya chiri kutsvaga kuwedzera kubva kune zvakakonzerwa nedenda reCOVID-19, iyo Jamaica Tourist Board's 'Kuwanazve Jamaica' danidziro iri kurumbidzwa sebudiriro huru mukubatsira kufambisa chirongwa ichi. Mukuratidza mupiro wakanaka wemushandirapamwe, Jamaica Tourism Gurukota, Edmund Bartlett vakati "yanga iri budiriro huru, uye mamwe mahotera achigashira anosvika makumi mashanu kubva muzana kusvika makumi matanhatu kubva muzana kubva pakabhuka vepo."
Gurukota Bartlett, vakazivisa izvi nguva pfupi yadarika apo vaitambira kuvhurwa kwehotera yeZoetry inokwana makumi mana nemapfumbamwe kuMontego Bay, zvichitevera kuvharwa kwemwedzi minomwe nekuda kwechirwere checoronavirus.
VaBartlett vakaratidza chivimbo chekuti "chirongwa ichi chichaenderera mberi kudzikisa kukonzeresa kwakakonzerwa nekudonha kwemarisiti epasi rose ekushanyirwa uye nekuona kuramba kuchikora kwechikamu kudzamara kumwe kuratidzika kwechinyakare kuchidzoka."
Akacherechedzawo kuti parizvino Jamaica irikunakidzwa nemazinga ekubhuka epamusoro mudunhu iri aine akawanda mabhajeti kwete kwete kuburikidza nevamiriri vekufamba. Kana zviyero zvazvino zvekufarira zvikachengetedzwa, "tiri kutarisira kutarisa vashanyi vanosvika miriyoni imwe mukupera kwegore, izvo zvingave budiriro inoyevedza, tichifunga mamiriro ezvinhu aripo," vakadaro Gurukota Bartlett.
Nezve kudyara mari, akati varimi vanoramba vachiratidza kuvimba mumusika weJamaican, achiwedzera kuti 90% yemapurojekiti akamborongwa achiri padanho, kunyangwe zvakakonzerwa nedenda reCOVID-19. Pakati peavo vakarongerwa kuuya-rwizi pane 1700-kamuri hotera muSt James, makamuri zviuru zviviri muGreen Island, Hanover, uye zvirongwa zvekuvandudza zvekushanya kweKingston nePort Royal.
"Uku kuratidza kwekuvimba muJamaica nevashambadzi kwakabatsira kusimudzira chimiro chedu senzvimbo inotungamira yekushanya," akadaro Gurukota sezvo aona kuti mari idzi dziri kuunza mikana yemabasa uye zvichikurudzira kuwedzera uye kusiyanisa kwechigadzirwa chekushanya.
Nekuda kwechikamu chayo, hurumende yanga ichishanda kugadzira nzvimbo inokwezva uye inosimudzira mari dzekutanga mubazi uye kusvika izvozvi, "tiri kuisa mari mukusimudzira zvivakwa, kusanganisira kuvandudza uye kuwedzera kwendege mbiri dzepasi rese, kugadzirisa nzira yemigwagwa, uye kuwedzera uye kusimudzira kwedu ngarava dzezvikepe, "akazivisa Gurukota Bartlett.
Akaona kuti nyika painopora kubva padambudziko razvino re COVID-19, pakanga pasina mubvunzo kuti kukura kwerudzi kunofanirwa kunge kuri kuburikidza nekushanya. "Kana kudzoreredza kwekushanya kuchizopa mutoro nekuchengetedza, tinofanira kutarisa pamusoro pekudyara kwekugara uye kukurudzira kudyara muhurongwa hwekutengesa huchaita kuti Jamaica irambe ichikwikwidzana uye ichipeta nguva dzese," Gurukota rezveKushanya rakadaro.
Zoetry ndeimwe yezvivakwa zvakati wandei zvinoshandiswa muJamaica ne AMResorts, kusanganisira mazana manomwe emakamuri eSecrets Resort, uye Breathless Resort, iyo yakavhurazve chivakwa chayo chemakamuri 700 nguva pfupi yadarika. Zvakavanzika zvadzokera mukushanda kubvira Nyamavhuvhu 150.
Mubatanidzwa Director weKutengesa, Kaylia Harrison akaburitsa pachena kuti zuva rapfuura kuvhurwa, Zoetry akaitisa muchato uye akawanda akambomisikidzwa akadzorerwa munaGumiguru, "saka kugara kwacho hakusi kutaridzika zvachose. "Vhiki rino tichange takangwara muma50s nema60s, saka zvakanaka."
Dzimwe nhau nezveJamaica